chidimbu chimwe chinoshambira
Yoga pfeka set
Matipi ezuva nezuva ekuchengetedza bikini Swimsuits
na admin on 20-04-15
Kuti uchengetedze elasticity yakafanana uye ruvara seye bikini muzhizha rinotevera, kuchengetwa kwemazuva ese kwakakosha. Izvi zvinotevera ndiwo mapepa ayo anofanirwa kutaridzirwa kune pakuchengetera kwemazuva ese bikini. Kuwedzera hupenyu hwe bikini yako, iwe unogona kutevera ita. 1.Cleaning o ...
Pamusoro gumi bikini mhando chimiro
Bikini inoshandisa mashoma mashoma emucheka uye chivharo chidiki kumusoro kuti uwedzere runako rwe mwari muviri uye chimiro. Bikini inowedzera kunaka kwekunze kwehutano hwevakadzi uye chivimbo. Ndezvipi vakadzi zve bikini brand? Heano gumi ekumusoro bikini mhando inotungamirwa naLa Perla yemunhu wese. Kwete.1 ...
Canton Fair Swimwear Zvigadzirwa Exhibition
Mushure memakore anopfuura makumi maviri ekuvandudza, iyo Canton Fair Swimwear Show yakabudirira kugadzira nharaunda yayo, kuunza pamwe chete vakuru uye nyanzvi kubva kutenderera nyika gore rega. Kurudzira bhizinesi pakati pevezera. Swimwear shows anokoshesa. Kune akawanda swimwear shows izvozvi, ...
Kero: Chikamu 905, Rongtaian Chivakwa, No.139 Jinhuai Street, Quanzhou, Fujian, China